माछा मारेर गुजरा चलाउने भीरकोटका माझी परिवारलाई करोडौंको करछलीको मुद्दा , राहात दिने नाममा यसरी फसाइयो Global TV Nepal
माछा मारेर गुजरा चलाउने भीरकोटका माझी परिवारलाई करोडौंको करछलीको मुद्दा , राहात दिने नाममा यसरी फसाइयो
डम्बर चौलागाई, दोलखा । तामाकोसी गाउँपालिका वडा नं. १ भीरकोट माझी गाउँका आधा दर्जन माझीका परिवारमा त्रास मा बाँचिरहेका छन्। माछा मारेर जिवनयापन चलाउदै आएका माझी परिवारलाई न निन्द्रा नै छ न भोक नै।
२०७२ सालमा गएको विकासकारी भूकम्पपछि पीडितहरुका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जस्तापाता सहितका राहत लिएर विभिन्न ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु गाउँ मा आउथे । स्थानीयहरु पनि खेतीपाती नै छाडेर राहत लिन तर्फ लागे ।
भुकम्प गएको एक वर्षपछि गाउँमा कपडा बेच्न हिँड्ने मधेशी मूलका एक जना व्यक्तिले आफूलाई ‘तपाईंको घर ढलेछ, राहत दिने मान्छे भेटाइदिन्छु, काठमाडौं आउनुस्’ भनेको पीडित लछुमन माझी बताउछ्न। उनैको भनाइबाट काठमाडौंमा मधेसी मूलका एक जना व्यक्तिसंग भेट भयो । उनले ३ पटकसम्म काठमाडौं बोलाए, राहत भन्दै पटक पटक ३६ हजार ५ सय पनि दिए । त्यही बेला पहिलो पटक नागरिकताको फोटोकपी लिए । फोटो खिचेर, फोटो पनि लिए
लछुमनको नाममा दर्ता भएको पान नं. बाट ५ करोड २० लाख राजस्व छली भएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागले अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । परिवारको नाममा २ रोपनी समेत जग्गा नभएका माझीको परिवार तामाकोसीमा माछा मारेर दैनिकी चलाउँछन् । यस्ता व्यक्तिका नाममा एक्कासी अदालतबाट हाजिर हुन पत्र आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत चकित भएका छन् । कम्पनीको बारेमा जानकारी नै नभएका र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय समेत नटेकेका माझीको नाममा राजस्व छली गरेको अभियोग छ । गाउँका अरु पनि लछुमनकै लाइनमा छन ।
राहतका नाममा लछुमन मात्र होइन ,माझीगाउँका अधिकांश गाउँले यसरी नै नागरिकता र फोटो बुझाएर कागजमा सही गर्नेहरु छन् । सोही ठाउँका दिनेश माझी, देवेन्द्र माझी, नारायण माझी, शरण माझी लगायत एउटै व्यक्तिलाई नागरिकता दिएर राहत लिनेमा पर्छन् ।
गरिबी निवारणका लागि राहत ल्याउनका लागि नागरिकता दिन भन्दै मागेको र
सर्लाहीको मलंगवा बोलाएर होटलमा ३ दिनसम्म राखेर फर्कने बेला ११ हजारका दरले २ जनालाई खर्च दिएको अर्का पिडित वीरबहादुर माझी बताउँछन।
माछा मारेर दैनिक चलाइरहेका उनीहरु यतिबेला आफुलाइ राहातको आश्वासन दिएर ठगी गर्ने तिनै ब्यक्तिहरुको खोजिमा छन ।
धुम्बाराहीबाट हटाइयो नेकपाको बोर्ड
अफगानिस्तानबाट थप १० जना नेपालीको उद्धार
कोरोना संक्रमणबाट कर्णालीमा थप ८ को मृत्यु